जर्मनी संग फ्रान्स गरेको पूर्वी सीमाना नजिकै, स्ट्रासबर्ग मा स्थित छ स्ट्रासबर्ग रेल स्टेशन. यो देशको दोस्रो ठूलो हो, र यथार्थमा सबै भन्दा सुन्दर.
शब्द ग्रैंड पनि वर्णन गर्न सुरु गर्दैन आन्ट्वर्प केन्द्रिय रेल स्टेशन. नियो-बारोक मार्वल ट्राभल सेन्टर भन्दा कैथेड्रल जस्तो देखिन्छ. रेल स्टेशन पनि संगमरमर र पत्थर बनेको एक विशाल पर्खने कोठा, एक विशाल घडी विशेषताहरु र ठूलो घरको छानो ढाकिएको छ.
यो ट्रेन स्टेशन बस भव्य र मूल साओ Bento डे Ave-मारिया कन्भेन्ट र बाहिर थियो, यात्री भवन सुन्दर पेरिसियन-शैली पत्थर मोहरा छ देख्ने.
तपाईंले यी सुन्दर रेलवे स्टेशन को कुनै पनि भ्रमण गरेका? हामीलाई आफ्नो फोटो Tweet @SaveATrain तपाईंको अर्को साहसिक बुक गर्न तयार? त्यसपछि भ्रमण www.saveatrain.com
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropes-most-beautiful-railway-stations%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#रेलवे स्टेशनहरू रेल स्टेशन रेल यात्रा यात्रा ट्राभेलबिजियम travelfrance ट्राभपोर्टगल